Iprofayile yenkampani - Beulines Technology Co., Ltd.
Efumaneka e-Guangzhou, i-BEULINES igxile kwindawo ye-Aesthetics yezoNyango kangangeminyaka engama-20 kwaye ibandakanyeke ngamandla ekwenziweni, ukuThengiswa nokuThengiswa kweeMveliso eziPhambili zoNyango lwe-Aesthetics, kubandakanya iHyaluronic Acid Dermal Filler, iBotulinum Toxin Type A, Mesotherapy Solution (Fat Reduce / Mhlophe / Ukukhula kweenwele / i-Anti Melano / ukuguga okuchaseneyo), i-PDO Thread, njl.
Ngokusekwe kwiminyaka emininzi yamava esicelo seshishini kunye neqela leengcali lophando kunye neqela lophuhliso, i-BEULINES ijolise ekunikezeleni ngokhuseleko kunye neemveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye noluhlu olupheleleyo lweenkonzo ukwanelisa abathengi. Ngabasebenzi abaqeqeshwe kakuhle, iklasi eyi-10,000 GMP esemgangathweni namagumbi acocekileyo kunye nezixhobo zemveliso ephezulu, inkampani iqinisekisa ukuveliswa okuqhubekekayo kwezixhobo zonyango kunye neemveliso zenaliti yeziyobisi zeCandelo III eziqinisekisa kwimithetho nemimiselo yoLawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweziyobisi (CFDA) kunye ne-EU MDD.
I-BEULINES ineziqinisekiso zokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kwaye ipasile ukuqinisekiswa komgangatho wamazwe aphesheya njenge-CE, MDSAP, GMP, njl.
I-BEULINES ixhasa umbono kunye nomoya wokuqhubeka kwezinto ezintsha, ezisekwe kwinzululwazi, ukwenza umbono ongcono kuluntu, ukunceda abantu babe sempilweni, bonwabe kwaye baphumelele ebomini.
I-BEULINES ilindele ukutyelela kunye nentsebenziswano
-Uxanduva kubo bonke abathengi
Nokuba ngaba ngabathengi bangaphandle okanye abathengi bangaphakathi, umdla wabo kunye nokwoneliseka zezona zinto sizikhathalelayo kunye neenjongo zomsebenzi.
-Uxanduva kubo bonke abasebenzi
ukuvuza ngokufanelekileyo abasebenzi ngegalelo labo, ukuhlonipha ubuntu babo, isidima kunye nemfihlo, ukuxabisa iitalente zabo, ukuxhobisa ngokupheleleyo, ukuphuhlisa amandla abo, ukubonelela ngendawo yokusebenza ekhuselekileyo necocekileyo kunye noqeqesho olufanelekileyo kunye namathuba ophuhliso, Yiba noxanduva lokunyaniseka kwenkampani kunye nokusebenza isiseko sovavanyo, ukusebenza okuphezulu kunye nembuyekezo ephezulu.
ukubonelela uluntu ngeemveliso zobugcisa obuphezulu kunye nomgangatho ophezulu, kunye negalelo kwinjongo yempilo yabantu.
Kufuneka sidale umoya wonxibelelwano lwangaphakathi oluvulekileyo, senze umgaqo-nkqubo olungileyo nongaguquguqukiyo, simisele inkqubo yengqesho yabanako ukusebenza kunye nabangeneleli, kwaye sihlakulele iqela elidibanisa nokuzabalazela bonke abasebenzi, singaze sithi boyisiwe, bazicele umngeni, kwaye balandele ukugqwesa koMoya. ; uphando oluqhubekayo kunye nophuhliso lweeprojekthi ezintsha zokufezekisa ubunkokheli beendleko kunye netekhnoloji, ukuze inkampani ihlale ingoyisi.
I-Beulines yasekwa ngokusesikweni, ngokukodwa kwishishini lezonyango lobugcisa.
Ijeli ye-hyaluronate ye-sodium yonyango ifumene isatifikethi se-CE.
Iyadlulisa iso13485-2016 isatifikethi somgangatho esitsha.
Ukuthengisa iiBulol kumazwe angama-25, kufikelelwe kwiziphumo ezilungileyo zeklinikhi, akukho ziphumo zibi ukuya kuthi ga ngoku.
Iphumelele ngempumelelo isatifikethi somgangatho we-ISO9001 / IS013485.
Kwasekwa isebe laseGuangzhou leBeulines, landisa ishishini lokuthumela ngaphandle.
Sele sidlulile isatifikethi se-MDSAP seziko eliqhelekileyo laseBritane (BSI).
● I-ISO 9001 ● I-ISO 13485 ● CE 2460 ● I-MDSAP